Raashiya oo Gantaalo Casri ah ka iibinaysa Turkiga – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Raashiya oo Gantaalo Casri ah ka iibinaysa Turkiga
By Radio Dalsan Reporter	 On Jun 8, 2019
Madaxa Shirkadda Difaaca Raashiya ROSTEC, Sergey Chemesov ayaa sheegay inay muddo 2 bilood gudahooda ku gaarsiin doonaan dalka Turkiga Nidaamka Gantaalladda Difaaca ee S 400, isla markaana la tababaray shaqaalihii ku hawl-geli lahaa.
Sergey Chemezov waxa uu hadlkaasi ka sheegay Shirka Dhaqaalaha Caalamiga ee shalay ka furmay magaalladda Saint Peterburg ee dalka Raashiya
Waxa uu hoosta ka xariiqay inuu Heshiiskaasi mar hore galay Heerarkii ugu dambeeyey, iyadoo Dowladda Turkiga shaacisay muddada ay dhamaan kharajka Gantaallada S400 ku bixin doonto.
Madaxa Shirkadda Difaaca Raashiya ee ROSTEC waxa kale oo uu shaaciyey inay tababarka u dhameeyeen Khubarada Turkishka ee ku hawlgeli lahaa Nidaamka Difaaca Gantaalladad ee S400, taasi oo xusay inay tahay calaamad muujinaysa inuu heshiisku dhamaad ku dhow yahay, inkastoo ay Dowladda Maraykanka si xooggan u mucaardsan tahay Heshiiskaasi.
Xiisad ayaana ka dhex aloosan Dowladaha Maraykanka iyo Turkiga oo ku aadan Iibsiga Turkiga ee Gantaalladda Raashiya ee Nidaamka Difaaca ee S400
Waaxda Difaaca Maraykanka ee The Pentagon waxay u sheegtay Dowladda Turkiga inay kansal-gareynayaan Qandaaskii Diyaaradaha Dagaalka ee F35 Fighter Jets looga iibin lahaa Turkiga, haddii ay Dowladda Turkiga sii wadaan Qandaraaska ay Raashiya kaga iibsanayaan Gantaalladda S-400 missile defence system.
Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Maraykanka, Patrik Shanahan waxa uu qoraal u diray Dowladda Turkiga oo uu ku sheegay in dhamaan Tababarkii Duuliyayaasha Turkiga ee Diyaaradaha F35 la soo gebagebeyn doono bisha soo socota ee July 31-da.
Waxa kale oo uu u sheeegay Duuliyayaasha Turkiga ee tababarka Diyaaradaha Dagalka ee F35 ku qaadanayey gudaha Maraykanka laga doonayo inay dalka isaga ambabaxaan ka hor dhamaadka bisha soo socota.
Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Maraykanka, Patrik Shanahan waxa uu qoraal uu u diray Turkiga ku sheegay inaysan jiri doonin tababar cusub oo Diyaaradaha F35, iyadoo la qorsheeyey in 34 Arday Tukish ah loo tababari lahaa Duulista Diyaaradaha Dagaalka ee F35 sannadkan gudihiisa.
Waxa kale oo uu qoraalkiisa uga digay Dowladda Turkiga in Heshiiska ay Raashiya uga iibsanayaan Gantaalladad S400 uu khatar gelinayo xiriirka ay la leeyihiin Isbahaysiga NATO, isla markaana uu dhaawaci doono Dhaqaalaha Turkiga.
Maraykanka waxay horey Turkiag la galeen heshiis looga iibinayo 100 ka mid ah Diyaaradaha Dagaalka F35, oo ay ku kici doonto lacag dhan 9 Billion oo Dollar
Sawirro:-RW Kheyre oo la kulmay Safiirka Cusub ee Midowga Yurub ee Somalia
Mas’uuliyiinta Gobolka Hiiraan oo beeniyay eedeymo uu soo jeediyay Daba-geed